36 mitsara yakanaka yehupenyu | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 29/03/2021 14:21 | Mitsara
Tiri kurarama munyika umo zvinhu zvese zvinoita kunge zviri nyore kana kuomarara. Hapana nzvimbo yepakati. Asi hapasi pacho nguva dzose chiyero kwete nekuti zvinhu zviri nyore kana zvakanyanya kuoma, asi nekuda kwemaonero ehupenyu ane mumwe nemumwe. Maonero atinoona zvinhu anoenderana nezvakawanda zvemukati nekunze zvinhu zvemumwe nemumwe wedu, ndosaka uchiziva mamwe mazwi akanaka muhupenyu anogona kutiita kuti tione zvinhu nenzira iri nani.
Nekuti, kana tichida kurarama hupenyu hwatinozvinzwa isu pachedu uye nezvevamwe, saka zvakakosha kuti iwe udzidzise kufunga kwako. Neiyi nzira chete ndipo paunotanga kuona zvinhu mune tarisiro uye iwe uchanakidzwa nguva dzese zvakare.
1 Nei mitsara yakanaka
2 Iwe unofanirwa kuita chikamu chako
3 Ratidza uye uvandudze zuva rako zuva nezuva
4 Akanaka hupenyu mitsara iyo ichaita kuti iwe uratidze
Nei mitsara yakanaka
Kune mitsara yakanaka muhupenyu iyo ine simba rakawanda kupfuura raunofungidzira. Simba rake ndiro iro isu tinokwanisa kuzvikurudzira uye shandura nzira yedu yekuona hupenyu. Kukwanisa kugadzira iyo "bhatani" mumusoro kuti utange kuva nechiono chehupenyu nekujeka kwakawanda uye nerima shoma repfungwa.
Paunoshanda pane ako akanaka mafungiro, iwo anogona kuve injini yehupenyu hwako. Ivo vanogona kukubatsira iwe kunzwa sekuti girazi rakazara hafu pane hafu isina chinhu. Izvi zvinogona kuita kuti iwe uve neakanaka shanduko yemunhu uye nekudaro, iva netariro yakawanda.
Kune izvi zvese, isu tinoda kukupa ruoko nezvidimbu izvi zvaunogona kuve nepfuma diki yehungwaru inokutendera iva netariro yakawanda pamberi pechero mamiriro ehupenyu. Ivo vanozokubatsira iwe zvirinani kutsungirira nemamiriro akaomesesa muhupenyu hwako uye ugone kuzadzikisa chero chinhu iwe chaunoisa pfungwa dzako.
Iwe unofanirwa kuita chikamu chako
Sezvazvinofanira kutarisirwa, nekuverenga chete mitsara yakanaka yehupenyu hazvichinje zvese kamwechete. Hupenyu hwako hahuzogadzirisike nekungoaverenga. Saka, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unofanirwa kuita chikamu chako kukwanisa kuona zvinhu nenzira yakanaka uye nekudaro, zvinhu zvinotanga kufamba zvirinani.
Chinhu chakakosha ndechekuti uvhure hupenyu hwako kuva netariro uye nekuchinja nzira yaunoona hupenyu, unotanga kuva netariro yakawanda mukati mako, chimwe chinhu icho, zvinenge zvangoerekana zvaitika, ichatanga kukubatsira iwe kuve nemweya wakanaka kugadzikana.
Ratidza uye uvandudze zuva rako zuva nezuva
Mushure mekuverenga mitsara iyo yatichakupa pazasi, zvakakosha kuti iwe ufunge nezve akasiyana matekitori ehupenyu hwako uye nemazuva ako. Ita chiitiko icho pane chimwe nechimwe chezvirevo, iwe unotsvaga nzira yekuona kuti ungazvizivise sei iwe mune yega yega.
Nenzira iyi, paunotanga kufunga kuti imwe kana yakawanda yemitsara iyi inogona kukuita kuti unzwe kuzivikanwa, ipapo unogona kunakidzwa nehupenyu zvakanyanya uye nezvose zvaunokupa. Iwe unenge uine iro simba rakakodzera kuti upe nguva uye uwane mweya yako mukutarisana nedambudziko ripi neripi.
Akanaka hupenyu mitsara iyo ichaita kuti iwe uratidze
Kana izvo zvaunoda zviri zvishoma kukurudzira kuti utarisezve pahupenyu hwako uchinzwa zvakanaka, saka usarasikirwa nesarudzo yedu yeakanaka hupenyu mitsara. Unogona kuzvinyora pasi kana kuzvichengeta, asi zvakakosha kuti uve nazvo padyo newe kuitira kuti iwe uverenge pazvinenge zvakakodzera.
Hupenyu hunotanga maminetsi mashanu ega ega.
Iko kunovhara musuwo, hwindo rinovhurika.
Zvinhu hazvidi kuchinja nyika kuti ive yakakosha.
Kana tangobvuma miganho yedu, isu tinoenda kupfuura kwavo.
Dzidza kubva pane zvakapfuura, rarama mune zviripo uye shandira ramangwana.
Dzimwe nguva vanhu vanochema, kwete nekuti vasina simba, asi nekuti vagara kwenguva refu.
Kana uchikwanisa kuzvirota unogona kuzviita.
Hunhu hwakasimba hunogadzira zvishamiso kupfuura chero mushonga.
Rombo rakanaka rinouya apo gadziriro inosangana nemukana.
Ndakadzidza kuti zvirinani usanyanya kunetseka. Izvo zvinouya ndezvechimwe chinhu, izvo zvinoenda ... futi.
Rasa kusuwa uye kushushikana. Hupenyu hwakanaka, hune mazuva mashoma uye chete ikozvino isu tinofanirwa kunakirwa.
Vanhu vakanaka vanochinja nyika, nepo vanhu vasina kunaka vachiramba iri sezvazviri.
Hupenyu hwakanaka hahuwanikwe nekuvanza kusasimba kwedu, asi nekuita kuti simba redu ripenye.
Rega kunyemwerera kwako kuchinje nyika, asi usarega nyika ichichinja kunyemwerera kwako.
Kana iwe uchida kurarama hupenyu hunofadza, sunga icho kune chinangwa, kwete kumunhu kana chinhu.
Zvinetso ndizvo zvinoita kuti hupenyu hunakidze, uye kuakunda ndiko kunoita kuti hupenyu huve nechinangwa.
Runako chimiro chendangariro.
Kushivirira kunovava, asi michero yacho inotapira.
Kugadzira hakusi munzira nyowani, asi muchiratidzo chitsva.
Kana iwe uri kutsvaga munhu kuti achinje hupenyu hwako, edza kutarisa mugirazi.
Chinhu chakashata nezvekudzidza nekuita ndechekuti hatimbopedza kudzidza.
Kana tikawedzeredza mufaro wedu, sezvatinoita nekusuwa kwedu, matambudziko edu anorasikirwa nekukosha.
Ndiri kutenda kune wese munhu akati HAPANA kwandiri. Ndokutenda kwavari kuti ndiri kuita zvandiri.
Ngativei vechokwadi uye tiite zvisingaiti.
Hazvina kunonoka kuve izvo zvaungave iwe.
Hapana munhu akapa zvakanakisa zvake akazvidemba.
Munhu wega wega anokwanisa kuzvishandura.
Nyora mumoyo mako kuti zuva rega rega ndiro rakanyanya kunaka gore.
Iko kune simba rekusunda rine simba kupfuura chiutsi, magetsi, uye simba reatomiki: kuda.
Iwe hauna kumbobvira wakura zvakanyanya kuti uve neimwe chinangwa kana imwe kurota.
Haisi iyo yavanokudana iwe, ndizvo zvaunopindura.
Izvo zvisingauraye zvinokusimbisa.
Mufaro unogona kuwanikwa munguva dzakaomesesa, kana zvisiri kungoedza kubatidza mwenje.
Kuonga kunofanirwa kuve chiito chenguva dzose cheawa rega rega, chezuva rega rega, cheupenyu hwese.
Kukundwa hakuna kuvava kunze kwekunge iwe uchimedza.
Kuti utore chiito chakanaka unofanirwa kuchengetedza maonero akanaka.
Ndeupi wavo waunonyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » 36 mitsara yakanaka yehupenyu
Jose Othmaro Menjivar Maiwe akadaro
Kupfuura mitsara yakanaka, idzidziso huru dzatinoda uye isu tinokokwa kuti tishandise mukutsvaga hupenyu huzere.
Ndinokutendai zvikuru, Mudzidzisi María José.
Pindura kuna Jose Othmaro Menjivar Maiwe
Iñigo Sastre Garay akadaro
Iyo yakandibata zvakanyanya ndiyo iyo inoreva: Chii chisingauraye chinoita kuti usimbe.
Zviri pauzima nekuti zvakandibata muhupenyu hwangu mushure mekudonha kwakati wandei, uko pandakaenda ndainzwa kusimba, kunyangwe paine njodzi yekudonha zvakare, simba randakanzwa mushure mekukunda chiitiko chaifadza zvikuru.
Pindura kuna Iñigo Sastre Garay